Eoropa Afovoany & Atsinanana · Desambra, 2020 · Global Voices teny Malagasy
Eoropa Afovoany & Atsinanana · Desambra, 2020
Tantara mikasika ny Eoropa Afovoany & Atsinanana tamin'ny Desambra, 2020
Ho ampy handrisihana an-dry zareo Tseky hanao vaksiny COVID ve ny tononkalo?
Repoblika Tseky 30 Desambra 2020
Nandefa fanentanana iray vaovao ny governemanta tseky mba handresena ny tahotra sy ireo ahiahin'ny vahoakany momba ny fanaovana vaksiny
Etazonia any Syria: Inona no antenaina amin'ny fitondrana vaovao?
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 15 Desambra 2020
Ny fijerena ny maha-olombelona no tena tsy itovian'ireo fitantanana roa tao Etazonia momba ny ady any Siria, i Washington mitolona manao izay tsy hitaran'ny loza mitatao ateraky ny asa fampihorohoroana sy ny dindon'i Rosia any amin'ny faritra iray iankinan'ny ain-dehibe.
Ny 14 Desambra, miaraha aminay HIRESAKA MIVANTANA ny ‘Belarosia 2020: Mbola mampakatra hatrany’
Belarosia 10 Desambra 2020
Miaraha aminay sy ireo vahiny telo nasaina mba hanao jeritodika ireo tranga miseho any Belarosia taorian'ny fifidianana izay ho filohampirenena natao tamin'ny Aogositra. Handeha mivantana ao amin'ny Zoom sy ny Facebook ity hetsika ity.
Melohin'ny Global Voices ny fanafihana natao tamin'ny FTMF Metamorphosis any Makedonia Avaratra
Makedonia 04 Desambra 2020
Miantso ny manampahefana any Makedonia Avaratra izahay mba hanao fanadihadiana momba ireo fanafihana ireo ary hampihatra ny lalàna mifanaraka amin'izany amin'ireo mpanao meloka, ary hiaro koa ny mpiasan'ny Metamorphosis.